Tranonkala maherin’ny 1.500 no nakatona tao Shina miady amin’ny pôrnôgrafia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Avrily 2019 5:55 GMT
Samy nanamarika i Xiao Qiang, talen'ny China Digital Times , sy Jack Qui, mpampianatra mpanampy ao amin'ny sampan-draharahan'ny asa fanaovan-gazety sy ny serasera ao amin'ny Oniversiten'i Shina ao Hong Kong fa tafiditra ao anatin'ny resaka sivana ara-politika ihany koa (avy amin'ny RFA) ny hetsika fiadiana amin'ny pôrnôgrafia.
Ankoatra izany, araka ny gazety Economic News Daily, ao anatin'ireo orinasa miisa 62 ao anaty lisitry ny Ivontoerana manara-maso ny Tati-Baovao Tsy Ara-dalana amin'ny Aterineto ao Shina noho ny votoatin'izy ireo maloto sy tsy mendrika dia mampiasa renivola fiaingana ny iray ampahadiminy amin'izy ireo. Miainga amin'ny 2 tapitrisa RMB ka hatramin'ny 0,3 miliara dolara izany. Eo ho eo amin'ny 4 lavitrisa RMB eo ho eo ny tomban'ezaka amin'ny fampiasam-bola ankapobeny.
Lasibatry ny fanadiovana miady amin'ny pôrnôgrafia ihany koa ny tranonkalan'ny Tambajotra Sosialy, toy ny tambajotra Douban sy XiaoNei ary maro ireo vondrona nomerika nesorina. Tamin'ny taona 2008, naharay vola mitentina 384 tapitrisa dolara avy amin'ny Softbank (mpampiasa renivola fiaingana amin'ny teknolojiam-baovao Japoney) ny Xiaonei Net.
Friendfeed nohodidinina rindrina
Tranonkala vahiny maro no voasivana ankoatra ireo tranonkala ao an-toerana. Nitatitra i LeON fa narindra ny Friendfeed.com tao Shina. Nolavina ny rohy sy ny fitaovana tafiditra amin'ny ff.im. Ny fitaovana toy ny TOR ihany no azon'ny mpisera nampiasaina mba ahafahana miditra.
Na dia henjana aza ny famoretana dia mahita izany ho fahafahana mampiroborobo ny fitaovana hanoherana ny Rindrin'Afo Lehibe ireo bilaogera sasany .
Naminavina i Baozuitun, bilaogera, fa hamindra ny lohamiliny ho any ampitan-dranomasina ny mpitantana ny tranonkala raha maro ny tranonkala noterena nakatona ary havitrika izy ireo hampiroborobo ny fitaovana afaka mandingana ny rindrin'afo lehibe.
3 herinandro izayHong Kong (Shina)